Raad Raac News Online – Faalo ku saabsan is barbar dhiga awood qaybsiga Puntland iyo Somaliland ee Goboladda Sool iyo Cayn (Liiska Madaxdooda Puntland iyo Somaliland) Qoraalka Alhristaha
Faalo ku saabsan is barbar dhiga awood qaybsiga Puntland iyo Somaliland ee Goboladda Sool iyo Cayn (Liiska Madaxdooda Puntland iyo Somaliland) Qoraalka Alhristaha
Faarax January 24, 2013 1
Hordhac taariikhed ku saabsan Goboladda Sool iyo Cayn.
Sida ku cad taariikhda Somaalida markii uu gumeysigu yimid bilowgii qarnigii 19aad , dadka ku nool goboladda maanta loo yaqaan Sool, Sanaag iyo Cayn waxey ahaayeyn kuwii ugu horeeyay ee kala horyimid gumeysiga dagaal adag oo gumeysi diid ah. Dagaalkii gumeysi diid ka ahaa ee hogaaminayey Sayid Maxamed C/le Xasan ayaa ahaa kii ugu dheera ugana adkaa ee ka dhacey Qaaradda Afrika, dagaalkaas oo soconayay 22 sano, sida ku cad buugta taariikhda dagaalkaasu wuxuu galaaftey nolasha 3 meelood meel dadkii ku noolaa dhulkii ingriisku haystey. Dadka maanta ku nool goboladda Sool iyo Cayn waxey ahaayeyn kuwii hurmuudka ka ahaa jihaadkaas xornimo doonka ah, ka dib markii diyaarado lagu jabiyay ciidankii Daraawiishta dadka dagan goboladaas waxaa lagu qabsadey xoog, halka beelaha dagan waqooyiga ay gacan saar fiican la lahaayeyn gumeysigii ingriiska, markii dagaalk u socdeyn ay si wayn ula safnaayeyn gumesiga.
Intii dagaalkaasu socdey dadka dagan Sool iyo cayn waxey taageero naf iyo maalba ah ka helayeyn dadka ay walaalaha yihiin ee daganaa gobolada Bariga ee maanta loo yaqaan Puntland,Halka dhanka kale dadka dagan waqooyiga ee maanta loo yaqaan Somaliland ay kala kulmayeyn dagaal iyo weerar joogta ah oo gumesigu dabada ka soo riixayey si uu danahiis u gaaro. Waxaa xusid muddan in mustacmaradii Ingriisku heshiis beeleed lagashey dhammaan beelaha kale marka laga reebo beelaha dagan Sool iyo Cayn oo ayaga xoog lagu maquuniyay 22 sano oo dagaal ah ka dib diyaaradana loo isticmaaley, taas oo ka dhigtey Somaliya wadankii ugu horeeyay ee Afrika ah oo diyaarado lagu weeraro.
Jabkii iyo burburkii Daraawiishta ka dib, dadki ku noolaa Sool iyo cayn waxaa soo gaarey dhib aad u wayn, dhiigoodii, maalkoodi iyo dhulkoodiiba waxaa laga dhigtey hadur waxaana boobey mustacmaradii Ingriiska iyo beelihii Somaliyeed ee waqooyiga dagaan oo gacan saar lalahaa gumeystaha. Halka dadkii daganaa Bariga ay kala kulmeyn hiil iyo gacan walaal tinimo, taas oo ay u arkayeen in ay tahey waajib walaal tinimo oo ay gudanayeen.
Inkasta oo dadka dagan gobolada Sool iyo Cayn iyo dadka kale ee ay isku fikirka ahaayen ay dhib iyo khasaare badan kala kulmeyn xorrimodoonkii Somaliya. Balse nasiib wanaag waxey 1960 ayay aheyd markii ay 2 gobal ee ay kala gumeysanayeyn Talyaaniga iyo Ingriisku hantayn xorriyadoodi isla markaasna la dhisey dowladdii Somaliyeed ee ugu horeysay. Balse nasiib daro 20 sano ka dib waxaa Somaliya ka bilowdey jamhado hubeysan oo lahaa aragtiyo kala duwan oo jilbaha u dhigey dowladdii Soomaaliyeed oo uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Bare. Jamhadahaas tan ugu aragtida fogeyd waxey aheyd SNM oo qorshaheedu ahaa baabi’inta midnimadda umadda Somaliyeed iyo kala goynta wadanka. Balse waxaa la yaab aheyd in SNM ay si gaar ah u weerareysay dadka dagan Sool iyo Cayn oo ay u arkayayn kuwa daacad u ah dowladdii umadda Somaliyeed. Taas oo keentay dagaaladii ka dhacey Ceerigaabo, Caynabo, Burco, Xudun, Oog, Widh-widh, howdka Buuhoodle iyo meela kale oo badan.
Waxaa xusid mudan madada adkeyd ee dagaaladaasu socdeyn in dadka dagan Sool iyo Cayn ay ka helayeeyn taageero walaal tinimo dadka dagan gobolada Bariga. Mana jirin wax dhibaato ah oo dhexmartey dadka walaalaha ah ee ku noolaa gobolada Waqooyi bari ee somaliya.
Burburkii dowladdii dhexe Soomaliya ka dib waxaa ka dhismey goboladii waqooyi galbeed iyo waqooyi bari 2 maamul oo kala hadaf duwan oo ah kuwa maanta loo yaqaan Puntland iyo Somaliland. Dhisitaankii Dowladda Puntland dadka dagan Sool iyo Cayn waxay ku lahaayen door aad u wayn umana aysan kala harin isimada, shacabka iyo siyaasiyiintuba. Balse dhanka kale siyaasiyiin kooban oo soo jeeda beelaha dagan Sool iyo Cayn ayaa qayb ka ahaa dhisitaanka maamulka Puntland. Kala qaybsanaantaas ayaa waxey keentey in khal-khal iyo jah-wareer siyaasadeed ku yimaado dad waynaha ku nool Sool iyo Cayn.
Hadaba waxaa lagama maar maan ah in la iskweydiiyo meesha ay taal danta iyo maslaxadda dadka dagan goboladaas. Sida aan wada ognahey dadka marka tandooda la fiirinayo meesha ay ku jirto waxaa laga cabiraa hadba qaybta ay ku leeyihiin miiska wax qaybsiga dowliga ah iyo hayadaha go’aan gaarista.
Xilalka ay ka hayaan Maamulka Somaliland
1-Wasiirka dib u dajinta iyo guriyaynta
2-Wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka
3-Wasiirka ganacsiga warshadaha
4-Wasiir ku xigaynka arrimaha gudaha
6-Agaasime guud caafimaad
7-Agaasimaha guud Awqaafta
8-Agaasimaha guud arrimaha dibada
9-Guddomiye xiganka baarlamaanka
Total: 9 Masuul
Xilalaka ay ka hayaan Maamulka Puntland
1-Madax-wayne ku xigaynka waddanka
2-Guddomiye ku xigaynka Baarlamaanka
3-Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah
4-Wasiirka Kallumeysiga iyo kheyraadka badda
5-Wasiirka Howlaha guud iyo gaadiidka
6-Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, hiddaha iyo dhaqanka
7-Wasiirka duulista hawada iyo garoomada
8-Wasiiru Dowlaha madax-tooyada iyo maamul wanaaga
9-Wasiir ku xigaeenka dakadaha iyo la dagaalanka burcad-badeedka
10-Wasiir ku xigaynka Caafimaadka
11-Wasiir ku xigaynka Maaliyadda
12-Wasiir ku xigaynka Beeraha iyo waraabka
14-Agaasimaha guud ee wasaaradda Aminga
15-Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha
16-Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta
17-Agaasimaha guud wasaaradda warshadaha
18-Taliye ku xigaynka guud ee Booliska
19-Taliye ku xiganka guud ee ciidanka daraawiishta
20-Amaan duulka guud ee ciidanka daraawiishta
21-Taliyaha hogaanka CID
22-Taliyaha hogaanka ciidanka booliska
23-Guddomiye ku xiganka hayada shaqaalaha rayidka ah
24-Guddomiye ku xigeenka guddiga dooroshooyinka
Total: 40 masuul
Qore: Yaasiin Cabdi Xaaji